घुम्थाङमा पहिरो : पाँचको शव निकालियो, ३१ बेवत्ता -
घुम्थाङमा पहिरो : पाँचको शव निकालियो, ३१ बेवत्ता
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १२:१४ । सिन्धुपाल्चोक
बाह्रबिसे–७ घुम्थाङमा पहिरा जाँदा पुरिएका पाँच जनाको शव भेटिएको छ । नागपुजेकी ७० वर्षीया भक्तिमाया श्रेष्ठ र विक गाउँका २४ वर्षीया जुनुमाया विक र ४० वर्षीय सर्किनी प्रधानको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिए । दुई जनाको सनाखत हुन बाँकी छ ।
पहिरामा पुरिएर ३१ जना बेपत्ता भएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसहित स्थानीय युवाहरु उद्धार कार्यमा खटिएका छन् । पहिरामा परी घाइते भएका तीन जनालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाह्रबिसेमा ल्याइएको छ ।
सभामुख सापकोटा पहिरोस्थलमा
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा घुम्थाङको पहिरो अवलोकन गर्न घटनास्थल पुगेको छ । उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार स्थलमार्ग हुँदै सभामुख सापकोटा घुम्थाङ पुगेको हो । उनीसँगै नेकपा केन्द्रीय सदस्य माधवप्रसाद सापकोटालगायत नेताहरु पनि घटनास्थल पुगेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक नागपुजे पहिरो अपडेट : ४ जनाको शव फेला, २६ जना बेपत्ता
सिन्धुपाल्चोक नागपुजे पहिरो : एक महिलाको शव फेला
तातोपानी पहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन
१. साउदीको दमाम-काठमाडौं नौ उडान थपियो, एक हजार कोरोना संक्रमित निको
२. उपत्यकाको अनलाइन शिक्षा शुःल्कमा एकरुपता बनाउने प्रयास
३. सार्वजनिक यातायात : ‘न स्यानिटाइजर न दूरी, भाडा मात्र बढी’
४. शम्भुजीत, डब्बु र सरिताले ल्याए पहिलो भेटमै…
५. गरिबी निवारणका लागि चीनले पाँच वर्षमा १५ खर्ब युआन परिचालन
६. भियतनामको शक्तिशाली आँधीमा तीनको मृत्यु एक सयभन्दा बढी घाइते